မေစစ်ပိုင်| January 31, 2013 | Hits:26,413
sai htun naing January 31, 2013 - 8:35 pm ဒီအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကို အဓိကကြိုးကိုင်သူ တာဝန်ရှိသူကို အမြန်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်
Reply ရာဇာ January 31, 2013 - 8:53 pm နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးလဲ နောက်ထပ်ဆုတခု ထပ်တိုးတာပေါ့…ဖော့စ်ဖရပ် ဦးသိန်းစိန် …လို့……မငြင်းနဲ့နော်…ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီ ကပေးမှာ…..
Reply smiley February 1, 2013 - 10:55 am ဘယ်တော့လဲဟင်၊ အနော်တိချင်လို့ပါ
Reply မြန်မာပြည်သား January 31, 2013 - 11:03 pm ဦးနေဝင်း သည် ပြည်သူလူထု ပေါ်ကောင်းချင်ယောင်ဆောင်၍ ပြည်သူလူထု ကိုနှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။ ဦးသန်းရွှေသည် ပြည်သူလူထုအပေါ်တွင် ကောင်းချင်ယောင် မဆောင်နိုင်လောက်အောင် အထင်အမြင်လွှဲမှားစွာ နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ February 1, 2013 - 3:17 am ပြောရတာလဲ အထပ်ထပ်အခါခါ ထပ်ပြန်တလဲလဲ ဓါတ်ပြား အပ်ကြောင်းထပ်နေပါပြီ။
Reply khin February 1, 2013 - 10:05 am ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီအချိ်န်မှာကိုရီးယားသွားသင့်တာမဟုတ်ဘူး လက်ပံတောင်၊ ရခိ်ုင်၊ချင်စတဲ့နေရာတွေကိုသွားသင့်တာ စိတ်ကုန်တယ်
Reply အပြင်လူ February 1, 2013 - 10:19 am အို … မဟုတ်ဖူး … မဟုတ်ဖူး မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုနေ …
Reply pps၁၂၃၄၅ February 1, 2013 - 2:45 pm သမ္မတကြီး က အလိမ်အကောက်တော့ ကျွမ်းတယ်။ ဂိုးတော့ မသွင်းတတ်ဘူး။
Reply Ven. Pandita February 1, 2013 - 3:01 pm Phosphorous bomb ဗုံးမျိုးကို အရပ်သားတွေအပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ အရပ်သား တွေနေထိုင်ရာ နေရာမျိုးမှာဖြစ်စေ လုံးဝသုံးခွင့်မရှိဘူးလို့ Geneva Convention (Protocol III, Article I) မှာ အတိအလင်း တားမြစ် ထားပါတယ်။ စစ်တိုက်တဲ့နေရာ မှာတော့ မိမိတပ်တွေ လှုပ်ရှားမှုကို မီးခိုးထုတ်ပြီး ဖုံးကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးခွင့် ရှိပါတယ်။ တဖက်ရန်သူစစ်သားတွေကို မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးရင်တော့ ဓါတုဗေဒလက်နက်သုံးစွဲရာရောက်တဲ့အတွက် ဓါတုလက်နက်ကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ မြန်မာပြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံတွေ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဗုံးမျိုးကို သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲရာမှာသုံးစွဲတာဟာ Geneva Convention ကိုချိုးဖေါက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီးခိုးထုတ်လွှတ်ဖို့ သုံးစွဲတဲ့ ဗုံးမျိုး ဖြစ်လို့ အစိုးရဖက်က “မီးခိုးဗုံး” သုံးတာပါလို့ ပြောတာဟာလဲ အမှန်ဖြစ်လောက်ပါတယ်။
Reply ဒေါက်တာဂုတ်ကြား February 1, 2013 - 3:04 pm သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများသိဘို့လိုပါပြီ။ဘူးကွယ်လို့ရတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်တော့
Reply Wut yee February 2, 2013 - 2:28 am ဒီအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကို အမိန့် ပေးတာဘယ်သူဖြစ်မလဲ။